အလှအပရေးရာ တိုတိုထွာထွာ ၂ (ခြောက်သွေ့ သော ဆံပင် နှင့် အဆီပြန်သော အသားအရည်)
အလှအပရေးရာ တိုတိုထွာထွာ ၂ (ခြောက်သွေ့ သော ဆံပင် နှင့် အဆီပြန်သော အသားအရည်)By deedeelwyn – July 6, 2011Posted in: Beauty, Shopping Guide အမေး:
http://shwebeauty.com မှ တဆင့် အဆီပြန်တဲ့ မျက်နှာနဲ့ ခြောက်သွေ့နေတဲ့ ဆံပင်အတွက် အကူအညီတောင်းရှင်လို့ပါ..
ကျမ မျက်နှာက အရမ်းအဆီပြန်တာမို့ ဖြစ်နိူင်ရင် အကြံညဏ်ပေးစေရှင်ပါတယ်.. သူငယ်ချင်းတွေ အကြံပေးလို့ Toner လည်း သုံးပါတယ်..
လောလောဆယ်တော့ မျက်နှာသစ်ဆေးနဲ့ မျက်နှာသစ်တယ်..
ပီးတော့ အဆီပြန်သူတွေ အတွက် ထုတ်ထားတဲ့ Toner ကိုသုံးတယ်..
Body Shop က အဆီပြန်သူတွေ အတွက် ထုတ်ထားတဲ့ ခရမ်ကို သုံးတယ်..
maybelline က အဆီပြန်သူတွေ အတွက် ထုတ်ထားတဲ့ မိတ်ကပ်ကို သုံးတယ်..
ဒါပေမယ့် အဆီပြန်တာ လျော့ မသွားပါဘူး.. ရုံးမှာ အဆီစုပ် တစ်ရှုးသုံးသုံးနေရတယ်..
ဖြစ်နိူင်မယ်ဆိုရင် ဘယ်ဟာက ပစ္စည်းမျိုးတွေကို သုံးပီး ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းရင် အဆီပြန်တာ သက်သာမယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးပါရှင်…
မနေ့ကတော့ FaceShop မှာ မျက်နှာပေါင်းတင်ဆေးသွားကြည့်တာ.. ဘယ်ဟာကို ၀ယ်ရမယ် မသိတာနဲ့ မ၀ယ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး..
နောက်တစ်ခုက ဆံပင်ပေါ့.. ဆံပင်က ကုန်သွားနဲ့ နှစ်က ဆေးဆိုးပီး ကောက်လိုက်တာ အခုတော့ တော်တော်ကို အခြေအနေဆိုးသွားပါတယ်..ဆံပင်တွေက ခြောက်ပီ အရမ်းကို ဖွာလန်နေပါတယ်..
အဲဒါကိုလည်း ဘယ်လို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတာ အကြံလေးပေးပေးပါရှင်..
shweBeauty ကို စာရေးဆက်သွယ်လာတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၁) ခြောက်သွေ ပျက်စီ့းတဲ့ ဆံပင်အတွက် moisturizer ပါတဲ့ conditioner ကိုသုံးစေချင်ပါတယ်။ shiseido က conditioner နဲ့hair mask က လည်းကောင်းပါတယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ မြန်မာ့ ရိုးရာ လည်းဖြစ်တဲ့အုန်းဆီကို ခေါင်းမလျှော်ခင် နာရီဝက် (သို့ ) တစ်နာရီလောက် ကြိုလိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ အုန်းဆီထည့်ထားရင်တော့ ဆီပြောင်အောင် ခေါင်းကို နှစ်ခါလောက်ပြန်လျှော်ရပါလိမ့်မယ်။ အုန်းဆီသုံးပြီး တစ်လလောက်ကြာရင် ဆံပင်ပိုသန်စွမ်းလာတာ၊ အရောင်ပိုတောက်လာတာ၊ ဆံသားမခြောက်တော့တာကို သိသိသာသာ သတိပြုမိလာပါလိမ့်မယ်။ အုန်းဆီစစ်စစ်ကို မြန်မာပြည်က ပြန်မှာနိုင်သလို၊ ကလားဈေး (little india) မှာလည်း လွယ်လွယ်ကူကူ ဝယ်နိုင်ပါတယ်။ shampoo ကို ဆံပင်ထဲ တိုက်ရိုက် မထည့် ပဲ ခွက်တခုထဲမှာ ရေနည်းနည်း နဲ့ အရင်ဖျော်ပြီးမှ လျှော်ရင် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ခြောက်သွေ့ ခြင်းနဲ့ဆံသားပျက်စီးခြင်းတို့ ကို သက်သာစေပါတယ်။ ခေါင်းကို အများဆုံး တရက်ခြား တခါသာ လျှော်သင့်ပါတယ်။ ခေါင်း ခဏခဏ လျှော်ခြင်း က လည်း ဆံပင်ခြောက်ခြင်း၊ ဆံသားပျက်စီးခြင်း တို့ ကို ဖြစ်စေပါတယ်။
၂) အဆီပြန်တဲ့ မျက်နှာအတွက်မှာတော့ ပထမဆုံးသတိထားရ တာက မျက်နှာသစ် ဆပ်ပြာဖြင့် ခဏခဏ မျက်နှာ မ,သစ်ဖို့ ပါ။ မျက်နှာသစ် ဆပ်ပြာများကြောင့် အသားအရည်ခြောက်ခန်းလာတဲ့ အခါ မျက်နှာရဲ့PH Balance ကို ညှိဖို့အဆီတစ်မျိုးကို သဘာဝအရထုတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအဆီက အဆီပြန်မှုကို အများဆုံး ဖြစ်စေပါတယ်။ မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာ ကို အများဆုံး မနက် နဲ့ည နှစ်ကြိမ်သာသုံး ပြီး တခြားအချိန်တွေမှာ ရေနဲ့ ပဲသစ်ပေးပါ။ makeup နဲ့skincare တွေကို ရွေးတဲ့အခါ cream type ကိုရှောင် ပြီး Lotion အ၇ည် ကို ရွှေးပါ။ cream က အဆီကို အခြေခံပြီး၊ lotion တွေက ရေ ကိုအခြေခံ ထုတ်ပါတယ်။
အဆီပြန်တဲ့ အသားအရည်ကို သိသိသာသာ သက်သာအောင် ‘CYCLAX’ တံဆိပ် ‘Lavender & Tea Tree’ Clarifying Face Mask ကို သုံးကြည့် ပါ။ London က ထုတ်တာ ဖြစ်ပြီး ‘Robinsons’ မှာဝယ်နိုင်ပါ တယ်။ S$5ဝန်းကျင်သာပေးရ ပေမယ့် အဆီပြန်တတ်သူတွေအတွက် တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ mask ပါ။ ရွှံ့(mud) အမျိုးအစား mask မို့လိမ်းပြီး ၅ မိနစ်ခန့် ကြာရင် ခြောက်စပြုပြီး မာလာပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ စကားပြောခြင်း၊ ရယ်ခြင်း များက အသားအရည်တွန့် ခြင်းကို အားပေးနိုင်တာမို့တတ်နိုင်ရင် mask လိမ်းထားတုန်း ၁၅ မိနစ်ခန့် မှာ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ထိုင်ပြီး တရားမှတ်နေတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ၁၅မိနစ်ခန့် နေပြီး မျက်နှာတစ်ခုလုံး ခြောက်လာရင်၊ ရေ နွေးနွေးလေးနဲ့ မျက်နှာသစ်ပြီး သုံးနေကျ toner နဲ့ skincare များကို အရင်လိုပဲသုံးနိုင်ပါတယ်။ မျက်နှာအသားကြမ်းသူများ နဲ့ ဖုရှိသူများလည်း ဒီ Cyclax mask ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ အနည်းငယ်ပြင်းတာမို့တပတ်တခါ ထက်တော့ ပိုမသုံးသင့်ပါဘူး။ တခြားရက်တွေမှာ အခြား အပျော့စား mask တွေကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ faceshop က Lemon mask ကလည်း အသားကို ကြည်စေပြီး အဆီပြန်တတ်သူတွေအတွက်လည်း သင့်တော်ပါတယ်။
တနေ့ ထက်တနေ့ ပိုပို လို့ လှနိုင်ပါစေ။
Posted July 8, 2011 at 4:06 PM	Sis, Thanksalot for your sharing.
I also have oily skin type.
I will noted it. Reply	magyi
Posted July 8, 2011 at 6:17 PM	SK I I ကို…အွန်လိုင်းကနေဘယ်လိုဝယ်ရမလဲဟင်..မကြီးက..မလေးကပါ..ဆိုင်တွေမှာမ၀ယ်ချင်ဘူး..မလိုတာတွေပါအတင်းနင်းကန်ရောင်းတတ်ကြလို့..မ၀ယ်ရင်လဲအားနာ..၀ယ်ရမှာလဲ..အပိုကုန်နဲ့..ကူညီပါအုန်းနော်..(SK I I )ကို..သုံးဘို့လည်း…ဒီဆိုဒ်ကဘဲ..တွေ့တာနော်..(မြန်မာမလေးတွေအသားအရေလှစေဘို့)
Posted July 10, 2011 at 1:58 AM	မကြီးရေ shweBeauty ကို အမြဲဝင်ဖတ်တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ။ http://sg.bestbuy-world.com မှာ cosmetic Brand တော်တော်များများကို ဝယ်နိုင်ပါတယ်။ SGD50 နဲ့ အထက်ဆိုရင် Singapore မြို့ တွင်း အခမဲ့ ပို့ ပါတယ်။ master, visa နဲ့cash on deliver ကြိုက်ရာပုံစံနဲ့ငွေချေလို့ ရပါတယ်။ Malaysia ကဆိုရင်တော့ shipping info ကို နဲနဲ မေးကြည့်လိုက်ပါနော်။
ဝယ်ရတာ အခက်အခဲ ရှိခဲ့ရင်လည်း shweBeauty ကို ပြန်ဆက်သွယ်လိုက်ပါရှင့်။ တခြားနည်းလမ်း ထပ်ရှာပေးပါ့မယ်။
Posted July 21, 2011 at 8:31 PM	ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်။
Reply	eiei phyu
Posted December 30, 2011 at 11:21 PM	ကျွန်မအသက်၄၀​ကျော်မှနဖူးနဲ့ ပါးပြင်မှာအဆီခဲ​တွေရှိလာပါတယ်​ peeling creme ​တွေ toner ​တွေသုံးလဲထွက်မသွားဘဲ​ချွေး​​ပေါက်ပဲကျယ်လာပါတယ်ဘာလုပ်ရမလဲရှင်
Posted January 5, 2012 at 4:56 PM	အဆီတွေစုရာကနေ အဆီခဲတွေမျက်နှာမှာ ထွက်တတ်ပါတယ်။ အဆီကို ထိန်းတဲ့ အသားေ၇ ဂရုစိုက်မှုများပုံမှန်လုပ်သွားရင် ပြောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်ရှင့်။ အဆီပြန်တဲ့ အသား၇ည်အတွက်အကောင်းဆုံးက အငွေ့ ခံ (steam) တဲ့ ပေါင်းတင်နည်းတွေပါ။ စပါးလင်ကိုပြုတ်ပြီး မီးဖိုကချ။ မျက်နှာကို အပူခံနိုင်သလောက် အိုးနားကပ်ပြီး အငွေ့ ပြန်သက်သာအောင် သဘက်လေးခြုံထားပြီး အငွေ့ ခံနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတဲ့ အခါ toner နဲ့moisturizer ကို တွဲသုံးခြင်းဖြင့် အသား၇ည်ရဲ့ အဆီကို မျှတအောင် ဆက်ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်ရှင့်။ အဆီဓာတ်မျှသွားတဲ့အခါ အဆီခဲများလည်း ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ တခြားနှစ်သက်ရာ အငွေ့ ခံပေါင်းတင်နည်းများလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်ရှင့်။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်။
Posted January 5, 2012 at 11:13 PM	မိတ်ကပ်လူးပြီး အပေါ်က သနပ်ခါးထပ်လူးတာ အမဲစက် ထွက်ဖို့ ပိုအားပေးသလိုဖြစ်သလားသိချင်လို့ပါ.. အဲလိုမှ မလိမ်းရင် အဆီအရမ်းပြန်ပြီး ချွေးပေါက်ကျယ်တာ ပိုသိသာလို့ပါ .. ချွေးပေါက်ကတော့ တော်တော်လေးကို ကျယ်တာပါ ..အကြံပေးပါဦးနော်
Related Posts	Beauty ၇ ရက်အတွင်း ၁၀ ပေါင်ချမယ် (Diet Plan : Lose 10 lbs in7days)မျက်တောင်ကို ဘယ်လို ဂရုစိုက် မလဲ? Basic Eyeshadow ♥2(Suitable for Doublelids)Basic Eyeshadow ♥ 1 (Suitable for Monolids)ဘွဲ့ အခမ်းအနားအတွက် ဆံပင်ပုံစံShopping GuideMETRO Post-Christmas Sale	Recent Posts